Wararka Dibadda – Page 5 – Shabakadda Amiirnuur
Donald Trump: “Sacuudi Carabiya Waxay Na Siiyeen $ 1 billion oo Loogu Talagalay Ciidankeena”
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ku wargaliyay Sucuudi Carabiya in codsi kasta oo ku saabsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka ay tahay inay iska bixiyaan kharashka ku baxaya. “Waxaan usheegay Sucuudi inay yihiin waddan qani ah, waa inay bixiyaan ciidamada dheeraadka ah, waxayna horeyba noogu soo xareeyeen […]
Waxaa sii kordhaya walaaca ay mas’uuliyiinta Americanka ah ka muujinayaan weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay dhowaan ku qaadeen gudaha wadanka Kenya. Mark Thomas Esper oo ah wasiirka difaaca Mareykanka oo ka hadlay weerarkii Saldhigga Simba Camp ee Manda Bay Lamu ayaa sheegay in uu ka […]
Wasaaradda Beeraha ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday in abuurka ay sannadkan u diyaarisay beeraleyda uu yahay mid yar marka loo eego xaaladihii hore, tanina waxay kicisay su’aalo ku saabsan karti-u-yeelashadeeda iyo gaaritaanka bartilmaameedka iyo saameynta ay taasi ku yeelan karto isku filnaansho. Madaxa waaxda adeegyada ee Wasaaradda Beeraha,Cabbaas Al-Shannaawi, […]
Washington waxay xaqiijisay inaysan dooneynin inay adeegsato awood militari oo ka dhan ah Iiraan, taa badalkeedana waxay xaqiijisay iney diyaar u tahay inay gasho wada hadal shuruud la’aan ah. Dhanka kale dowladda Shiicada Iiiraan ayaa sheegtay ineysan iyaduna dooneyn dagaal ay la gasho Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanak Donald Trump oo isagu […]
Beeraleyda reer Falastiin ayaa la halgamaya sii wadida waxsoosaarka Ubaxyada tan iyo 1991, waqtigaas oo inbadan oo ka mid ah beeraleyda kale ay isku dhiibeen una weeciyeen dalagyo kale, sababtuna ay tahay xayiraada Yahuuda ay kusoo rogtay lix sano taasoo keentay in la waayo meel loo dhoofiyo. Inta badan Ubaxyada […]
Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa sheegaya in khasaare badan uu ka dhashay shil diyaaradeed oo subaxnimadii saaka ka dhacay caasimadda dalkaas, ka dib markii diyaarad rayid ah oo reer Ukraine ah ay burburtay taasoo daqiiqado uun kasii maqnayd garoonka caalamiga ah ee Khomeini ee ku yaal magaalada Tehraan, waxaana […]
Wararka ka imaanaya dalalka Ciraaq iyo Iiraan ayaa waxay sheegayaan in la duqeeyay labo saldhig oo uu Mareykanku ku lahaa wadanka Ciraaq iyadoo lagu garaacay in ka badan 12 Gantaalada nooca loo yaqaano Balaastiigga. Telefishanka Iiraan ayaa baahiyay in gantaaladan loo fuliyay aargudasho dilkii taliyihii ciidamada Qudus Qaasim Suleymaani oo […]
Sawirro: Duuliye Sare oo Kamid Ah Mareykankii Lagu Laayay Lamu.
Dadka Ameerikaanka ah ayaa si tartiib tartiib ah usoo bandhigaya khasaarihii ku gaaray weerarkii Lamu. Kani waa sawirkii labaad muddo 48 saac gudahood ah, waana nin duuliye ahaa oo in badan ku lug lahaa duqeymaha dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed. Muuqaalka ninkan Mareykanka ah ayaa qabsaday baraha bulshada iyadoo si […]
Suuqa Saamiyada Masar oo Lumiyay Lacago Badan. (Warbixin)
Wararka dhanka dhaqaalaha ee ka imaanaya Masar ayaa waxay sheegayaan in Suuqa Saamiyada Masar ay soo wajaheen khasaarooyin lixaad leh taasoo ay u sabab yihiin arrimo badan. Suuqan ayaa lumiyey qiyaastii 25 bilyan oo rodol (una dhiganta qiyaastii 1.5 bilyan doolar). Tilmaanta ugu weyn ee saamiga “EGX30” ayaa luntay qiyaastii […]
Mareykanka oo Si Aan Horey Looga Baran U Qirtay Qeybo Kamid Ah Khasaaraha.
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa, magaciisana loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay khasaaraha ciidamadiisa kasoo gaaray weerarkii cuslaa ee maalintii shalay oo Axad ahayd ciidamo katirsan Al-Shabaab ku qaadeen saldhiga Masimba ee Laamu. Africom ayaa qiratay qeyb kamid ah khasaaraha kasoo gaaray weerarkii lagu […]